A na-emelite Telegram maka Mac na ngwa ahụ edegharịrị kpamkpam na Swift 3.0 | Esi m mac
A na-emelite Telegram maka Mac na ngwa ahụ edegharịrị kpamkpam na Swift 3.0
Ugbu a, anyị anataghị mmelite maka ngwa izi ozi Telegram maka Mac ogologo oge ma anyị enweelarịrị etiti anyị mbipute 2.92 nke na-agbakwunye ezigbo mmelite. Ma ọ bụ na ha nwere edere ya na ngwa ngwa ngwa Swift 3.0, ihe bụ isi nwere inye mma uru n'ozuzu na ngwa maka Mac, inwekwu nkwụsi ike na ọsọ, ee, ugbu a maka ugbu a ọ ga - enwe ma ọ bụ nwee ụfọdụ chinchi dịka nke anyị chọtara mgbe ị na - aza onye ị derela abụọ ahịrị n'ahịrị, nke na-enye gị ohere "idetuo" akara nke mbụ. Ma na ha n'ozuzu ha bu nkowa nke gha etecha ka ubochi ga na nsụgharị ndia.
Na nke a na mgbakwunye na ederede zuru ezu nke ngwa ahụ Anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ nke atụmatụ ọhụrụ etinyere na ọhụrụ nke Telegram maka Mac:
Ukwuu kwụsie ike na ọsọ
Ọsọ ọsọ ka mma, anyị ga-enweta mmelite ọhụrụ ugboro ugboro
Ihe mmado ogwe aka na emoji maka nkpuchi sara mbara
Na mgbakwunye na nke a, ha na-ahụ na mmelite na-esote nke ngwa ngwa ozi a ga-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ anyị ga-amasị. Ọ bụrụ na ị mezie obere nkọwa ndị dị ugbu a nwere ike ịnwe ma nọgide na-eme ka ndị ọzọ ka mma, olee ihe ọzọ ị ga-arịọ. Ugbu a, ha emelitere ngwa ahụ ogologo oge na ihe kpatara ya nwere ike ịbụ nke a, ngwa ọhụrụ ahụ nwere asụsụ Swift 3.0. N'izugbe, ha dị ka ọmarịcha ọhụụ nke ndị ọrụ niile ga-enwe ekele maka. Mgbe m si Mac, anyị na-arụsi ọrụ ike ọrụ nke ngwa a dị ka ọtụtụ n'ime gị amaworị na anyị nwere ike ikwu n'ezie na ọ bụ ngwa dị mkpa maka anyị. Cheta na a ngwa bụ kpam kpam free na mmelite maka ndị niile nwere ngwa awụnyere dị ozugbo site na mmelite taabụ nke Mac App Store.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » A na-emelite Telegram maka Mac na ngwa ahụ edegharịrị kpamkpam na Swift 3.0
8 Ndị isi Apple na-enweta ihe karịrị 13 mbak
Oge dị nso mgbe iPad Pro bụ MacBook na-arụ ọrụ na-esote?